धनगढीमा मिटर ब्याजीको जालो | Nagarik News - Nepal Republic Media
धनगढीमा मिटर ब्याजीको जालो
ठगी आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिँदै। तस्बिरः पुष्पराज जोशी/नागरिक
२४ भाद्र २०७६ १५ मिनेट पाठ
धनगढी - सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा केही वर्षयता फस्टाएको मिटर ब्याजीको जालोले कयौंको उठिवास लगाएको छ। कयौं व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन भने कयौं व्यक्तिको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। मिटर ब्याज सञ्चालन गिरोहका नाइके राजनीतिक पहुँच, प्रहरी अधिकारीसँगको उठबसले गर्दा पक्राउ परेका थिएनन्। ‘मिटर ब्याजीको भयानक जालो र ठगीको कहालीलाग्दो अवस्था छ।
कयौंले आत्महत्या गरेका छन्। कयौं घरवारविहीन भएका छन्। कयौंको घरजग्गा गुमेर सुकमबासी भएका छन्’, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भन्छन्,‘ जुन रुपमा प्रहरी प्रशासनबाट कारवाही हुनुपर्ने हो त्यो नहुनाले यो धन्दा मौलाएको छ।’ मिटर ब्याजबाट प्रहरी प्रशासन, केही राजनीतिक नेतालगायतलाई पनि फाइदा पुगेकाले यस्तो धन्दा चलाउनेहरु पक्राउ पर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
यकिन तथ्यांक नभए पनि मिटर ब्याजीको गिरोहबाट ठगिएर सम्पत्ति सबै गुमाई बिजोग हुनेको संख्या सयौं रहेको जानकार बताउँछन्। ‘मिटर ब्याजीको गिरोहवाट ठगिएर आत्महत्या गर्ने, ज्यान गुमाउने, परिवारमा सम्बन्ध विच्छेद हुने, उठिवास हुने अवस्था डरलाग्दो छ। यकिन तथ्यांक नभए पनि मेरो जानकारीमा सयौं पीडित छन्’,इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशी भन्छन्, ‘कम्तीमा आठदसजना पीडितले आत्महत्या गरिसकेका छन्।’ ठगी गर्ने गिरोहका कारण अझै यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने उनले बताए। ‘समाजमा भयाभह बनेको यो समस्याबारे प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता सबै जानकार छन् तर पनि दोषीमाथि कारबाही भएको छैन’, उनले भने।
धनगढीकै प्रतिष्ठित व्यापारी कामना स्टोरका सञ्चालक मानिष शर्मा मिटर ब्याजी गिरोहबाट ठगिएका कारण पलायन भएको जोशीले बताए। धनगढीकै होनहार युवा खेम रानाको रहस्यमय मृत्यु पनि मिटर ब्याजीको जालोकै कारण भएको आशंका छ। थोरै पैसा दिएर झुक्याएर घरजमिन आफ्नो नाममा बनाउने, थोरै पैसा दिएर बढी रकम लिएको भनेर औंठाछाप लगाउने, नक्कली कागजपत्र, लालपुर्जा, नापीको ट्रेस नक्सा बनाएर सम्पत्ति हड्प्ने र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा लुट्ने धेरै गिरोह धनगढीमा सक्रिय छन्।
‘यी गिरोहका नाइकेको प्रहरीका अधिकारीसँग, राजनीतिक दलका नेतासँग उठबस छ’, नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘ठगी गर्ने मान्छेहरुलाई राजनीतिक र शक्तिमा रहेकाको संरक्षण हुनाले डरलाग्दो गरी यस्तो धन्दा मौलाएको हो।’
अहिले ठगी गर्ने ठूलो गिरोहका सञ्जय राणा पक्राउ परेपछि अन्य गिरोहका व्यक्ति पनि समातिनुपर्ने आवाज सर्वसाधारणले उठाएका छन्। ‘प्रहरीले सञ्जय राणालाई पक्राउ गरी हल्ला फिँजाएर नाटकमात्र गरेमा कुनै अर्थ छैन। अनुसन्धान गरेर ठगी गिरोहमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक जोशी भन्छन्, ‘ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न सबैलाई कारबाही नगरेमा केही वर्षमा धनगढीमा ठूलो नोक्सान हुने निश्चित छ।’ गभर्नर, मन्त्रालयलगायतका छाप, लालपुर्जा, तमसुक बनाएर जसरी ठगी गरेको पाइएको छ, यसले मान्छेलाई जिउँदै मर्न बाध्य बनाएको उनी बताउँछन्।
देशको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती
मिटर ब्याजी धन्दा नियन्त्रण नगरेमा अर्थव्यवस्थाका लागि ठूलो चुनौती बन्ने विज्ञ बताउँछन्। ‘मिटर ब्याजको जालोले समानान्तर अर्थतन्त्रको अवस्था छ’, प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भन्छन्, ‘यो ठूलो आर्थिक अपराध हो। यसले अर्थतन्त्रलाई नै डाँवाडोल बनाउँछ।’
अर्थविद् शिवहरि मुडभरी पनि मिटर ब्याजको जालो अर्थतन्त्रका लागी घातक भएको बताउँछन्। ‘मिटर ब्याजको जालो र ठगी जसरी भइरहेको छ, यो अर्थतन्त्रका लागी घातक छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा अदृश्य मुद्रा र कालो धन हुने गर्छ।’ मिटर ब्याजको ठगीमा सीमित व्यक्तिले अथाह कमाउने र धेरैले अथाह गुमाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
लेनदेनको विवादले गिरोहको पर्दाफास
प्रहरीले धनगढी–६ मटियारीका ३८ वर्षीय सञ्जय राणालाई उनका सहयोगी दुईजनासहित गत बुधबार पक्राउ ग¥यो। उनीहरुको गिरोहसँग नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, अड्डा अदालतका छाप, नापी तथा मालपोतका मिसिललगायतका सामग्री फेला परेपछि सबै चकित भए। यो गिरोहमा को को संलग्न छन् ? यिनीहरुले कसरी र कोकोलाई ठगे ? धेरै कुरा खुल्न बाँकी छ। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा राज्यलाई नै चुनौती दिनेगरी गिरोहले ठूलो मात्रामा ठगी गरिरहेको यसबाट पनि खुलासा भएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा जिल्ला प्रहरीको टोलीले राणासहित धनगढी–३ मिलनचोकका २७ वर्षीय रुद्रप्रसाद अधिकारी र धनगढी–६ मटियारीकै ३३ वर्षीय कमलबहादुर विकलाई हतियारसहित बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार सञ्जय राणाले तमसुक बनाउने, जग्गा पास गर्नेलगायतका फर्जी काम अधिकारीबाट गराउँथे भने विक राणाका सहयोगी थिए।
उनीहरुबाट पेस्तोल एक थान, रिभल्बर एक थान, कटुवा पेस्तोल २ थान, सात राउन्ड गोली, ६ सय ७९ दशमलब ३६ ग्राम सुनका गहना, १८ करोड ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको २३ थान तमसुक, २ करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरका विभिन्न व्यक्तिको नाममा काटिएका १९ थान चेक, एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँको नेपाल राष्ट्रबैंकले रिलिज गरेको भनिएको बैंक ड्राफ्ट ३ थान, नापी कार्यालय धनगढी, राजस्व विभाग सेवा कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कैलाली, नापी कार्यालय टीकापुर, मालपोत कार्यालय कैलाली कम्प्युटर फाँट, नोटरी पब्लिक, कर अधिकृत, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्रबैंक बालुवाटार काठमाडौं, बर्दगोरीया गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, नोटरी पब्लिक भेरिफिकेसन, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्रबैंक नेपालगन्ज बाँके, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, कार्यालय प्रमुख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्रबैंक भैरहवा, सर्भेक्षकका छापहरु बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीप गिरीले बताए।
राणाले एउटा कोठा भाडामा लिएर आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। विभिन्न मन्त्रालय, गभर्नर र कार्यालयको छाप प्रयोग गरेर कस्तो प्रकारको जालसाजी गर्ने गरेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। ‘हामीले सबै प्रकारले अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, एसपी गिरीले भने।
काठमाडौंको असन घर भएका विन्देश्वर श्रेष्ठले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि राणासहित तीनजनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो। अघिल्लो साताको शुक्रबार श्रेष्ठले आफ्नो पैसा ठगेको भनेर राणाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। साढे ९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै श्रेष्ठले उजुरी दिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दक्षबहादुर बस्नेतले बताए।
स्रोतका अनुसार करिब डेढ वर्षअघि श्रेष्ठ र राणाबीच चिनजान भएको थियो। त्यसपछि उनीहरुले आपसलमा लेनदेन थालेका थिए। राणाको भनिएको करिब ६–७ करोड पर्ने आलिसान महल पनि श्रेष्ठकै नाममा रहेको खुलेको छ। कैलालीका एसपी गिरीले घर र केही जमिन श्रेष्ठको नाममा रहेको पाइएको बताए। ‘राणाले जमिन र घर श्रेष्ठको नाममा पास गरेको पाइयो’, उनले भने, ‘पछि घर फिर्ता गर्ने सर्तमा श्रेष्ठको नाममा पास गराएको भनिएको छ।’ हिरासतमा रहेका राणाले आफूलाई सञ्चालन गर्ने श्रेष्ठ नै भएको बयान दिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
राणाले घरमै मालपोतका कर्मचारी र फाइल मगाएर महल श्रेष्ठका नाममा पास गरेको खुलेको डिएसपी बस्नेतले बताए। नक्कली कागज पनि बनाउने भएकाले श्रेष्ठको नाममा पास भएको घर र जग्गाको लालपुर्जा नक्कली हो वा सही भनेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
घर र १० कट्ठा जमिन श्रेष्ठको नाममा पास गरिएको राणाकी श्रीमतीले बताएकी छन्। श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने अवाज उठेको छ तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन।
को हुन् सञ्जय राणा ?
पक्राउ परेका राणा डोटीको साबिक केआइसिंह गाउँपालिका तथा तत्कालीन राना गाउँ विकास समिति–९ का तुले रानाका छोरा हुन्। उनले आफूलाई जंगबहादुर राणा खलकको भनेर सञ्जयविक्रम राणा भनेर चिनाउँथे। वासुदेवीमा कक्षा १० सम्म पढेका उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन्। विद्यालयमा उनको नाम शेरबहादुर राना क्षेत्री थियो। बुवाको सानैमा निधन भएकाले अपांग अवस्थाकी आमाले उनलाई हुर्काइन्। अर्की आमाबाट एक दाइ र बहिनी भए पनि आफ्नी आमापट्टि उनी एक्ला छोरा हुन्। मटियारीमा उनको कच्ची घर थियो। सातआठ वर्षपहिले आर्थिक अभावबीच रहेका राणाको जीवनशैली पछिल्ला वर्षमा चामत्कारिक रुपमा बदलिएको थियो।
उनले नगद रकममा कारोबार गर्थे। कुनै पनि तमसुक बनाउनेलगायतको काम आफ्नो नामबाट गर्दैनथे। उनले फेसबुक एकाउन्ट पनि आफ्नो नामबाट खोलेका छैनन्। उनले अर्को नामबाट खोलेको फेसबुक चलाउँथे। घरबाट गाडीमा निस्केर सीमित ठाउँमा मात्रै जाने राणाले बन्द कोठाबाट सबै गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको प्रहरीले बतायो। उनले आधादर्जन सिमकार्ड बोक्थे। उनको प्रहरी अधिकारीहरुसँग हिचमिच थियो। भारतस्थित पिलभितमा बस्ने एसएसबीका डिआइजीलगायतका अधिकारीसँग पनि निकटता थियो। दुबै देशका प्रहरी अधिकारीसँगको सम्बन्धका कारण उनले सीमाबाट साना हतियार तथा अवैध सामग्री सजिलै ल्याउने गरेको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०७:०२ मंगलबार
मिटर_ब्याजी जालो सुदूरपश्चिम ठगी
मोदीलाई नारायणकाजीको आग्रह : 'पशुपतिनाथको आशिर्वाद लिएर सच्चिनुस् '
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशिर्वाद लिएर सच्चिन आग्रह गरेका छन् । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले मोदी आत्धात्मिक व्यक्तित्व भएकाले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिड्ने शक्ति लिन आग्रह गरे ।
झापामा चार लाख बिरुवा वितरण गरिँदै
डिभिजन वन कार्यालय झापाले यस वर्ष चार लाख दुई हजार बिरुवा वितरण गर्ने भएको छ।